Safaaradda Soomaaliya ee Dalka Zambia oo ka tacsiyadeysay Musiibadii 14,kii bishan ka dhacday Magaaladda Muqdisho. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Safaaradda Soomaaliya ee Dalka Zambia oo ka tacsiyadeysay Musiibadii 14,kii bishan ka...
Safaaradda Soomaaliya ee Dalka Zambia oo ka tacsiyadeysay Musiibadii 14,kii bishan ka dhacday Magaaladda Muqdisho.
Muqdisho (SONNA) Warsaxaafadeed ay soo saartay Safaaradda Soomaaliya ee Dalka Zambia ayaa si kulul loogu cambaareeyay qaraxii argagaxisinimo ee kooxaha nabad diidka ah ay maalin ka hor ay ka geysteen Magaaladda Muqdisho.
Danjiraha Safaaradda Soomaaliyeed ee Wadanka Zambia Danjire Maxamed Xasan Dawaare ayaa sheegay in ay aad uga xunyihiin dhibaatadii argagaxisada ay ka geysteen Magaaladda Muqdisho oo ay ku dhinteen dad tiradoodu ay kor u dhaafeyso 230 qof tirada dhaawacuna uu sedax boqol kasii badanyahay iyadoo weli ay dad nolol iyo geeri midna lagu la’yahay.
“innaa lillaah wa innaa Ileehi raajicuun waxaan halkaan ka cabaareyneynaa qaraxii kooxaha aragagixisadu ay 14,kii bishan ay ka geysteen Magaaladda Muqdisho kaasoo geystay qasaare isugu jira dhimasho,dhaawac iyo sidoo kale bur bur aad baaxadiisu u weyntahay oo ah musiibo qaran anigoo ku hadlaya magaca safaaradda iyo kan jaaliyada Soomalaiyeed ee Zambia waxaan murugta iyo dhibta la qeybsaneynaa Shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda musiibadii dhacday” ayuu yiri Danjire Maxamed Xasan Dawaare.
Maalintii sabtiga ayay aheyd markii qarax lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee ka qasaare noocaan ah geysta uu ka dhacay Magaaladda Muqdisho kaasoo shacabka Soomaaliyeed uu kasoo gaaray dhimasho,dhaawac iyo bur bur soo gaaray goobo ganacsi iyo dhismooyin.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo Booqday Xarunta Gurmad Qaran-Sawirro
Next articleShaqaalaha Wasaaradda Gaadiidka oo Dhiig u shubay dadka ku dhaawacmay qaraxii Muqdisho ka dhacay